IB Candidate School - Brainworks Total International School Yangon
Brainworks International School isaCandidate School for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that shareacommon philosophy-acommitment to high quality, challenging, international education that Brainworks International School believes is important for our students.
*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme(PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme , or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit https://www.ibo.org/
1.Baccalaureate (IB) What is IB?
The IB Program is recognized asaworld‐class college preparatory program. Students are challenged to become independent inquirers througharigorous curriculum that emphasizes the global nature of learning. The IB philosophy encourages students to become knowledgeable, inquirers, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, courageous, balanced and reflective individuals.
The International Baccalaureate® (IB) was founded in Geneva, Switzerland in 1968 asanon-profit educational foundation. International Schools got together to create the program intended to help internationally mobile students prepare for university through internationally standardized courses and assessments. As of January 2022, over 5400 schools in 159 countries offer IB programmes. https://www.ibo.org/about-the-ib/facts-and-figures/
၁။ IB အထက်တန်း ပညာရေးအကြောင်း အနည်းငယ် ရှင်းပြပါ။ IB အထက်တန်း ပညာရေးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
IB Program သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ကောလိပ်များကို တက်ရောက်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးသော Program ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများအား လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်လေ့လာနိုင်ရန် လိုအပ်သော သင်ကြားရမည့် အရာများအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ သေချာစွာ ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ အဆိုပါ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် လိုအပ်သော အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ စိတ်နေသဘောထား၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ IB Philosophy ဒသနသည် ကလေးများအား ဗဟုသုတပြည့်ဝစေရန်၊ တွေးခေါ်တတ်စေရန်၊ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတတ်စေရန်၊ စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်စေရန်၊ အချင်းချင်းရိုင်းပင်း ကူညီတတ်စေရန်၊ အကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များကို သေချာသဘောပေါက် လက်ခံလွယ်သောစိတ်ရှိစေရန်၊ ကိစ္စရပ်များကို သေချာစွာ ဖြေရှင်းတတ်စေရန်၊ မျှမျှတတတွေးခေါ်နေထိုင်တတ်စေရန် နှင့် ပြီးခဲ့သောကိစ္စရပ်များကို သေချာပြန် စဉ်းစား တွေးခေါ်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကလေးများအတွက် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
IB ကို 1968 ခုနှစ်တွင် ဂျနီဗာမြို့၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် အစိုးရမဟုတ်သော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းများ စုပေါင်းပြီး Mobile ကျောင်းသားများ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ သင်တန်းနှင့် စာမေးပွဲများကို ပြင်ဆင်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီ 2022 ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံပေါင်း 159 နိုင်ငံရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း 5400 ကျော်သည် IB ပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်သည်။ https://www.ibo.org/about-the-ib/facts-and-figures/
2.What do students get out of IB?
Students gain valuable college and career skills of critical thinking, problem-solving, time management, writing and research. Access to Top Tier Universities, Also preparing students for graduate school, Opportunity to Earn College Credit, A Complete High School Experience
၂။ IB ပညာရေးလမ်းကြောင်းမှ ကျောင်းသားလူငယ်များ မည်သည့်အရာများကို လေ့လာနိုင်ပါသနည်း။
အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို တက်လှမ်းရမည့် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ဝေဖန် ပိုင်းခြား နိုင်သောစွမ်းရည်၊ အချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု၊ စာအ‌ရေးအသားစွမ်းရည်နှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်း၊ ဘွဲ့လွန်ပညာရပ်များ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရန် ပြင်ဆင်‌ပေးခြင်း နှင့် ကောလိပ်ခရက်ဒစ်များ ရယူရန် အခွင့်အလမ်းများ အစရှိသည့် ပြီးပြည့်စုံသော အထက်တန်းကျောင်း အတွေ့အကြုံများကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
3.Can students earn college credit with IB?
Yes. IB students have earned as many as 42 semester hours, depending on the institution. See “University Recognition” at www.ibo.org.
၃။ ကျောင်းသား/သူ များအနေဖြင့် IB ပြီးမြောက်လျှင် တက္ကသိုလ်များ ကောလိပ်များတွင် ဆက်လက်ပညာ သင်ယူနိုင်ပါသလား?
IB ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့ တက်ရောက်မည့် institution ပေါ်မူတည်၍ semester တခုလျှင် အချိန်အားဖြင့် အများဆုံး ၄၂နာရီ လေ့လာသင်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ “University Recognition” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်ကို www.ibo.org. တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
4.Can anyone teach an IB class?
No. All teachers must first be trained certified at designated IB workshops.
၄။ မည်သို့သော ဆရာ/မများသည် IB အတန်းကို သင်ကြားနိုင်ပါသနည်း။
မည်သူမဆို IB အတန်းများကို သင်ကြားနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ အတန်းများကို သင်ကြားမည့် ဆရာ/မများ အားလုံးသည် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဦးစွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားခွင့် လက်မှတ် ရရပါမည်။ ထိုသို့ တက်ရောက် အောင်မြင်ပြီးသူများကသာ သင်ကြားနိုင်ပါမည်။
5.How are IB courses marked?
၅။ IB ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို မည်သို့သော စံနှုန်းနှင့် တွက်ချက်၍ အမှတ်ပေးပါသနည်း။
IB သင်ရိုးသည် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အမှတ်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၁ မှ ၇ အထိ စံ သတ်မှတ် ချက်များဖြင့် အမှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆရာများသည် ၎င်းတို့၏ IB လေ့ကျင့်မှုအတွင်း သင်ကြားလေ့ကျင့်ထားကြသော အကဲဖြတ်ခြင်း စံနှုန်းများကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ဆရာများသည် အကဲဖြတ်ရာတွင် IB မှ နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေသော အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်းများအတိုင်း အဆင့် ၁ မှ ၇ အထိ ပြောင်းလဲ ရယူပါသည်။ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
IB သင်ရိုးတစ်ခုစီတွင် IB အဖွဲ့အစည်းထံသို့ တင်ပြရမည့် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများရှိပြီး နောက်ဆုံးစာမေးပွဲများ (သို့) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများ ကိုလည်း ပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်တန်းအတွင်း ဆရာများမှ နေ့စဉ်ပေးအပ်သော အလုပ်များသည် ကျောင်းသားများ IB သင်တန်း၏ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် စွမ်းရည်များကို တိုးတက်ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းသားများသည် IB သင်ရိုးတွင် ဘာသာရပ် ၆ ခု သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဘာသာရပ် ၆ ခုအတွင်း အများဆုံး ၄၂ မှတ် (ဘာသာရပ် ၆ ခု x ရမှတ် ၇မှတ်) ရရှိပါမည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ Extended Essay ၊ TOK Essay၊ Oral Presentation တို့မှ ၃ မှတ် ထပ်လောင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ IB သင်ရိုးတစ်ခုအတွင်း အများဆုံး ၄၅ မှတ်အထိ ရရှိ နိုင်ပါသည်။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် IB သင်ရိုးတစ်ခုကို ပြီးမြောက်၍ IB Diploma ရရှိရန် CAS ၏ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
6.How do IB marks compare to percentage marks?
For the most part, percentage marks are not used to communicate an IB student’s progress. However, IB students can receiveatranscript that showsaconversion of their IB marks of 1-7 toapercentage grade. This conversion process is consistently applied by all IB teachers at Brainworks International usingaconversion scale.
၆။ IB ဘာသာရပ်များကို (Point)အမှတ်ပေးခြင်း၊ (Percentage)ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အမှတ်ပေးခြင်းကို မည်သို့ နှိုင်းယှဥ် ကြည့်ရပါမည်နည်း။
IBဘာသာရပ်များသည် အများဆုံး7Points နှင့် အနည်းဆုံး 1 Point ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး IB Certificate ပေါ်တွင် ဖော်ပြပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ IB ကျောင်းသား၏ Transcript ပေါ်တွင် Percentage လည်းဖော်ပြပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Brainworksမှ ဆရာ/ဆရာမများသည် ဤကဲ့သို့ ပြောင်းလဲဖော်ပြခြင်း စံနှုန်းကို အစဥ်အဆက် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
IB ကျောင်းသားတစ်ယောက်သည် IB Certificate နှင့် IB Transcript ဟူ၍ Certificate နှစ်ခု ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
7.How do I obtain an IB Diploma?
၇။ IB Diplomaကို မည်သို့ ရနိုင်ပါသနည်း။
ကျောင်းသား/သူများနှင့် ၎င်းတို့မိဘများအနေဖြင့် IB Diploma ရရှိရန် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သော နည်းလမ်းများအား IB World School ရှိ IB Coordinator နှင့် ဆွေးနွေးရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။ IBကျောင်းသား/သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိဘများအနေဖြင့် IBဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော IB အထွေထွေ စည်းမျဉ်းများအား ဖတ်ရှုလေ့လာရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
8.What happens if I go into the program and find out it’s not for me, or I’m not doing well?
Sometimes students may decide that the IB Diploma Program is notagood fit for them. Students who have registered for the IBDP are expected to complete their Grade 11 year and it is at this juncture that the student is advised to leave the program to support their transition to the regular academic program and register for courses that are required foraregular High School certificate.
၈။ IB Diploma Program ကိုသင်ယူချိန်အတွင်း မိမိတို့အတွက် အဆင်မပြေမှုများ ရှိလာခြင်း၊ သို့မဟုတ် သင်ကြာမှုများကို ကောင်းကောင်းမလိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။
တခါတရံတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် IB Diploma Program သည် သူတို့ လိုလားသော ပညာရေး ပန်းတိုင်အတွက် သင့်တော်သောရွေးခြယ်မှု မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်မြင်ယူဆတတ်ကြပါသည်။ IBDP အတွက် စာရင်းသွင်းထားသူများသည် Grade-11 ထိပြီးမြောက်အောင်မြင်သူများ ဖြစ်ရပါမည်။ Grade-11 အတန်း ပြီးဆုံးချိန်တွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် IBDP ကို ပြီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် သင်ယူနိုင်ပါသည်။
သို့မဟုတ်ပါက တခြားသင့်တော်သော အထက်တန်းပညာရေး လမ်းကြောင်းသို့ အစီစဥ်တကျ ကူးပြောင်း၍ ဆက်လက် သင်ယူနိုင်ပါသည်။
9.Do all universities accept IB Diploma graduates even if students haven’t graduated with high school credits?
၉။ IB Diploma ဘွဲ့ရရန်အတွက် အထက်တန်းမှဂုဏ်ထူးမှတ်နှင့် မအောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများကို တက္ကသိုလ်များမှ လက်ခံပါသလား။
IB Diploma ဘွဲ့ကို အောင်မြင်စွာရရှိလိုသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများသည် အထက်တန်းကျောင်း အောင်မြင်ထားသူများ ဖြစ်ရပါမည်။ တက္ကသိုလ်များ/ကောလိပ်များသည် IB Diploma အတန်းအတွက် ခိုင်မာသော သင်ကြားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လိုအပ်မှုများနှင့် သီးသန့်တက်ရောက်ထားသော IB အတန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် တန်းခွဲများကို အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
တက္ကသိုလ်များ/ကောလိပ်များသည် IB Diploma တက်ရာက်မည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအတွက် ရေးဆွဲထားသော IB အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများ၊ ပညာတော်သင်ဆုများနှင့် အထူးဆုများကို အကျွမ်းတဝင် ရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီတွင် IB Diploma အတွက် ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများရှိပါသည်။ IB Diploma အတန်းတက်ရောက်မည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့တက်ရောက်ရန် ရည်မှန်းထားသည့် တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်မှ မှတ်ပုံတင်/ဝင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဌာနများသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး IB Diploma အတန်းအတွက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
10.Canastudent involved in activities inside and outside of school, still be successful in the IB Diploma Program?
၁၀။ ကျောင်းတွင်းနှင့် ကျောင်းပြင်ပ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်နေသော ကျောင်းသားတစ်ယောက်သည် IB Diploma ပရိုဂရမ်တွင် အောင်မြင်စွာပါဝင်နိုင်ပါသလား?
IB Diploma ပရိုဂရမ်တွင် ပါဝင်သော ကျောင်းသားအများစုသည် အခြားသော လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
IB Diploma ပရိုဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သော Creativity, Activity, Service (တီထွင်ဖန်တီးလိုခြင်း၊ ပါဝင်လှုပ်ရှားလိုခြင်း၊ ကူညီဝန်ဆောင်မှုပေးလိုခြင်း) အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်စေခြင်းသည် ကျောင်းသားများ၏ ပါဝင်လှုပ်ရှားလိုစိတ်ကို အားပေးလှုံဆော်ကာ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ ပညာရေး၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ လူမှုရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘဝများကြား ဟန်ချက်ညီစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် အချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုစွမ်းရည်များကိုလည်း သင်ယူကြရပါမည်။
11.What are the cores in IB and how important are they?
There are three cores to the IB:
Theory of Knowledge (TOK) inanutshell, it is an intellectually driven training in critical thinking
Creativity, Activity, Service (CAS) is about experiential learning and is often describes as the IB’S “qualitative difference”. It promotes the idea of learning by doing and is an excellent area where students can maintain depths of inquiry, reflection and hands on engagement on multiple fronts both locally and globally without any academic stress.
Extended Essay (EE). Focuses on independent research, explores the depth and scope of targeted subject areas and demands intellectual rigor.
The cores demonstrate that the IB Diploma is more thanacollection of academic subjects. It isaholistic programme concerned with the development of the whole person (student). This is why reflection is at the heart of each of the three parts of the Core. It focuses on how the student is developing and living out the attributes of the IB Learner Profile.
The IB identifies three specific aims of the cores:
To support and be supported by the academic subjects
To foster international mindedness
To develop self-awareness andasense of identity
The cores of the IB takes learning to new heights/levels and is nothing short of an eclectic mix of some of the greatest principles and best practices in educational psychology. Active participation and engagement with the cores is an invaluable asset for any IB student, and is rewarding for life.
၁၁။ IBတွင် အနှစ်သာရပြည့်ဝသော နယ်ပယ် ၃ ခုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
IB တွင် အနှစ်သာရပြည့်ဝသော နယ်ပယ် ၃ ခုကို သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပါသည်။
Theory of knowledge (TOK) သည် ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး ရရှိစေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှု ဖြစ်ပါသည်။
Creativity, Activity, Service (CAS)သည် အတွေ့အကြုံပိုင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့ သင်ကြားပေးမှု ဖြစ်၍ IB ၏ အရည်အသွေး ကွာခြားမှုအဖြစ် ဖော်ပြကြပါသည်။ ဤသင်ကြားမှုသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ သင်ယူရခြင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားများအတွက် သင်ယူမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ဖိစီးမှုများကို ကင်းဝေးစေပြီး မိမိတို့ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များစွာတွင် လက်တွေ့ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ နက်နဲသော တွေးခေါ်စူးစမ်းမှု၊ ကြုံတွေ့ရသော အကြောင်းအရာများကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်မှု တို့ကိုပါ တိုးတက်မြင့်မားစေပါသည်။
Extended Essay (EE) သည် ရည်ရွယ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် စူးစမ်းရှာဖွေရင်း ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ကောင်းစွာအသုံးချပြီး လွတ်လပ်သော သုတေသနပြု စာတမ်းရေးသားမှုကို ဗဟိုပြု သင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့သော အနှစ်သာရများကြောင့် IB Diploma သင်ရိုးသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ စုပေါင်း ထားခြင်းထက် ပိုမို ကောင်းမွန်ပြည့်စုံပါသည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက်လည်း အလုံးစုံ ကောင်းမွန်သည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြားမှုနယ်ပယ် ၃ ခု ၏ အနှစ်သာရသည် IB ၏ နှလုံးသားအဖြစ် ထင်ဟပ်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ကျောင်းသားများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမှုနှင့် IB Profile မှ ကောင်းမွန်သော ပင်ကိုယ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအား အသုံးချနေထိုင်နိုင်မှုကို အဓိကထား သင်ကြားပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
IBသည် အနှစ်သာရပြည့်ဝသော နယ်ပယ် ၃ ခုကို သင်ကြားရသော ရည်ရွယ်ချက်များကို ချမှတ်ထားပါသည်။
အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန်
မတူကွဲပြားသော ဖြစ်တည်မှုများကို နားလည်လက်ခံပေးတတ်သော နိုင်ငံသားကောင်း စိတ်ဓာတ် ဖြစ်ထွန်းစေရန်
မိမိကိုယ်မိမိ အမြဲသတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်စေရန်နှင့် ပညာရေး စိတ်ပညာအရ ကောင်းမွန်သော လေ့ကျင့်မှုများနှင့် မြင့်မားသော ရည်ရွယ်ချက်များ ပါဝင်သည့် IB သင်ရိုးသည် သင်ယူမှုအား မြင့်မားသော အဆင့်အတန်းသစ်တစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သင်ကြားခြင်းသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော IB ၏ အနှစ်သာရ များကို ရရှိနိုင်မည့် ဆုလာဘ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။